I-RiverTree Duplex- I-Riverside Plantation TreehouseAC - I-Airbnb
I-RiverTree Duplex- I-Riverside Plantation TreehouseAC
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguAjesh
Indlu yethu eyakhiwe emthini eyakhiwe ngamaplanga eyi-35feet, ekwisityalo esiqhelekileyo kwiinxweme zomlambo i-Kabani.
Ikumgangatho omabini; inqanaba elisezantsi linegumbi lokulala, igumbi lokuhlambela kunye netreyini. Inqanaba eliphezulu yindawo yokuphumla encinci enembonakalo yomlambo okanye ingasetyenziswa njengebhedi yeendwendwe ezongezelelekileyo.
I-duplex yenziwa yakhuthazwa yinto yesintu yaseKerala "Machulla veedu" ethetha ukuba kukho indawo ekwinqanaba eliphezulu, njengoko iphantsi kophahla. Yakhiwe ngobude obuziikhilomitha eziyi-35 kwisityalo sekofu i-pepper kwaye yenza kubekho ukuzola komlambo i-Kabani.
Iibhedi ezinkulu eziyi-2, Iibhedi ekuthiwa zii-hammock eziyi-3
32" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, intambo yepremiyamu
I-Karlad Lake nekharaveni,
I-Banasura Imperar Dam,
i-Meenmutty Banasura waterfall, Indawo yokubona ukuphuma kwelanga e-Kurumbalakotta,
Ichibi lasePookode, iMyuziyam Yeti,
Indawo yokujonga i-Lakkidi,
umthi wamatye, njl. ziindawo ezikufutshane
Umbuki zindwendwe ngu- Ajesh
Iindwendwe zinokusifumana kule nombolo +91 7356 41 8844 okanye +91 7560 89 3250 ngokufowuna okanye nge-whatsapp kwipropathi. Ndiyavuya ukunceda nanini na-24X7